Nkedo Factory, Ndị na -ebunye ya - Ndị na -emepụta China anwụ anwụ
Nkedo anwụ bụ usoro ihe nkedo ọla, nke ejiri ya na -eji oghere dị n'ime nke ịnwụ etinye nrụgide dị elu na ọla a wụrụ awụ. A na -ejikarị ebu nwere ike dị elu na -akpụzi ihe, nke yitụrụ ịkpụzi ntụtụ. Ọtụtụ ihe nkedo ịnwụ bụ enweghị igwe, dịka zinc, ọla kọpa, aluminom, magnesium, lead, tin na allo tin na alloys ha. Dabere na ụdị ịnwụ anwụ, ọ dị mkpa iji igwe oyi anwụ ịnya igwe ma ọ bụ igwe na -ekpo ọkụ ịnwụ igwe. T ...
Ọrụ nkwado maka ịnwụ ngwaahịa ọla
The uru nke na -anwụ mgbatị na -agụnye magburu onwe akụkụ ziri ezi. Ọtụtụ mgbe, nke a dabere na ihe nkedo. Uru bara uru bụ na njehie bụ 0.1mm maka nha 2.5cm nke mbụ, yana njehie na -abawanye site na 0.002 mm maka mgbakwunye 1cm ọ bụla. E jiri ya tụnyere usoro nkedo ndị ọzọ, elu nkedo ya dị larịị, okirikiri fillet dịkwa ihe dị ka micron 1-2.5. Enwere ike imepụta nkedo nwere ọkpụrụkpụ mgbidi ihe dịka 0.75 mm dị ka sandbox ma ọ bụ nkedo anwụ anwụ na -adịgide. Ọ nwere ike ozugbo ...
Otu nkwụsị ọrụ maka nkedo anwụ
Nhazi ọkwa nke igwe na -anwụ ọkụ Hot ụlọ anwụ igwe: zinc alloy, magnesium alloy, wdg; Oyi ụlọ na -anwụ mgbatị igwe: zinc alloy, magnesium alloy, aluminum alloy, ọla kọpa alloy, wdg; Igwe ihe nkedo kwụ ọtọ: zinc, aluminom, ọla kọpa, ndu, gbamgbam  Ọdịiche dị n'etiti ụlọ na -ekpo ọkụ na ime ụlọ oyi bụ ma usoro ntụtụ nke igwe nkedo anwụ ka emikpuru n'ime mmiri. Enwere ike ikewa igwe nkedo ịnwụ na kwụ ọtọ. Common nsogbu P ...
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Mmiri Efere, Aluminum CNC Machined Parts, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Ihe nkedo, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Ọnwụ nkedo Magnesium, Ngwaahịa niile